Wararkii ugu dambeeyey qarax ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Ghana | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Wararkii ugu dambeeyey qarax ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay...
Wararkii ugu dambeeyey qarax ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Ghana
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay tiro kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen walxaha qarxa uu ku dhacay mooto mareysay galbeedka Ghana, kadibna uu sameeyay qarax weyn, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen Jimcihii.
Shilkan ayaa ka dhacay deegaanka Piate, oo u dhow Bogoso, oo ah magaalo macdanta laga qodo oo ku taal degmada Dooxada Prestea-Huni, sida uu sheegay madaxa fulinta dowladda hoose ee degmada Isaac Dsamani.
Qaraxa ayaa burbur weyn u geystay tuulada APIate, oo ay ku nool yihiin ilaa 500 oo qof. “Waa xaalad murugo leh,” ayuu yiri Prosper Baah oo ah ku simaha madaxa adeegga gaadiidka caafimaadka.
“Runtii waa dhacdo nasiib darro ah, naxadin iyo murugona leh” ayuu ku yiri Madaxweynaha Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka, isagoo si qoto dheer uga tacsiyeeyay qoysaska dadka dhintay.
Washington (Caasimada Online) – Muslimiinta ayaa la saadaalinayaa in ay noqdaan dadka haysta diinta labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka marka la gaaro 2040-ka,...
Wararka Suuqa Kala iibsiga Caawa: Kylian Mbappe, Yannick Carrasco, Aubameyang, Raul...
Ugu yaraan 18 caruur ah oo lagu dilay weerar lagu qaaday...
Ayatollah Ali Khamenei oo shaaciyey inuu jiro qorshe lagu afgambinayo dowladda...